Dr Abiyi Ahmed Oo Ay Golaha Wakiilada Shacabka Ee JDFI U Ansixiyeen RW Dalka Loona dhaariyey Xilka Raysal-wasaarenimada dalka - Kali Times Somali
Dr Abiyi Ahmed Oo Ay Golaha Wakiilada Shacabka Ee JDFI U Ansixiyeen RW Dalka Loona dhaariyey Xilka Raysal-wasaarenimada dalka
April 2, 2018 Abdidub	Comment(0)
Addis Ababa(KALITIMES).Golaha wakiilada shacabka ee JDFI ayaa fadhi ay yeesheen maanta Dr. Abiyi Axmed u ansixiyay xilka raisal wasaarenimada cusub ee dalka inuu hogaanka uqabto kadib markii ay golaha xisbiga EPRDF udoorteen Dr. Abiyi gudoomiyaha xisbiga EPRDF. Waxaana soo dhigay isagoo taariikhdiisa kasheekeeyay madaxa xarunta dhexe ee xisbiga EPRDF mudane Shiferaw Shigute oo golaha sharafta leh kacodsaday inay ansixiyaan.
Hadaba kalfadhigan oo uu shir gudoominayay afhayeenka golaha wakiilada shacabka ee JDFI mudane Abadula Gemeda ayaa Ansixinta golaha wakiilada kadib waxaa loo dhaariyay Dr. Abiyi jagada raisal wasaarenimada dalka inuu hogaanka uqabto iyadoo uu raisal wasaarihii hore ee dalku mudane Hailemariam Desalegn uu si sharaf leh xilkii raisal wasaaranimada halkaasi ugu wareejiyay Dr. Abiyi Axmed.
Hadaba Raisal wasaaraha cusub oo si balaadhan loogu soo dhaweeyey wasaaradiisa ayaa waxaa munaasabada soo dhawaynta raisal wasaaraha cusub kasoo qaybgalay raisal-wasaarihii hore ee xilka wareejiyey mudane Hailemariam desalegn, Iyo Marwadiisa marwo Roman Tesfaye, Masuuliyiin sare oo xukuumada JDFI kasocday, diblamaasiyiin, marwada 1aad ee wadanka marwo zinaash taayaajew iyo mas’uuliyiin kale.
Dhan kale raisal-wasaarihii hore ee wadanka Mudane Hailemariam desalegn ayaa raisal-wasaaraha cusub kusoo wareejiyey wasaaradiisa iyo waaxaha kaladuwan ee ay kakooban tahay.wuxuuna mudane Hailemariam desalegn cadeeyey inuu raisal-wasaaraha cusub Dr abiyi axmed uu ulashaqayn doono si kago’naansho iyo cadcadaan kudheehan tahay islamarkaana uu taageero gaar ah siin dooono.
Sidoo kale raisal-wasaarihii hore ayaa sheegay inuusan xilka raisal-wasaarenimadu uusan ahayn mid si fudud looga gudbi karo hase yeeshee uu masuulka naftiisa uhura uu si fudud uga soo bixikaro.wuxuuna intaas kudaray, inkasta oo ay masuuliyada ugu wayn abiyyi ahmed saaran tahay haddana inuu diyaar uyahay inuu xili walba iyo meelwalba oo uu joogaba uu raisal-wasaaraha cusub kacaawin doono shaqo walba islamarkaana uu garab istaagi doono.
Dhanka kale raisal-wasaaraha cusub Dr abiyi ahmed ayaa isna dhankiisa sheegay inuu sharaf iyo karaamo dheeraad ah uhayo mudane Hailemariam desalegn, islamarkaana uu mahad naq balaadhan usoo jeedinayo raisal wasaarihii hore maadaama uu xiligii ugu adkaa siyaasada wadanka soo hogaamiyey si xilkasnimo lehna uu uga soo baxay waajibaadkii loo idmaday.
Sidoo kale raisal-wasaare Abiyyi ahmed ayaa cadeeyay inuu doonayo inuu noqdo masuul kudayda mudane Hailemariam desalegn maadaama uu xilka uwareejiyey si nabadgalyo iyo dimuqraadiyad buuxda leh oo rabitaankiisa ah,islamarkaana uu jecelyahay inuu isaguna xilka uwareejiyo sida Raysal-wasaarihii hore oo kale.wuxuuna masuulku intaa kudaray inuu xilka iyo waajibaadka shacabka iyo dawlada uga soo bixi doono si xilkasnimo leh.
Ugu dambayna kadib markii uu Raisal-wasaarihii hore mudane hailemariam desalegn xilka raisal-wasaarenimda kuwareejiyey masuulka cusub islamarkaana uu soo kalabaray Qaybaha kaladuwan ee xafiiska Raisal-wasaaraha ayuu raisal-wasaaraha cusub Dr abiyyi ahmedudiyaariyey xaflad sagootin ah oo si heer sare ah loo soo agaasimay, isagoo Dr abiyyi mahadnaq balaadhan usoo jeediyey mudane Hailemariam desaleg
Sanad Guurada 20aad Ee XDSHSI Oo Si Qurux Badan Looga Xusay Wadanka Jarmalka